किन हुन्छ आँखामा जलबिन्दु ? - ज्ञानविज्ञान
हामिले यो लेख नयाँ पत्रिकाबाट लिएको हौ ।
यस्तै अरु थुप्रै जानकारीको लागी कृपया हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला र यो लेख मनपरेको खण्डमा लाइक तथा सेयर गर्दिनु होला ।
Don't Miss it तोरीको साग खादा कति फाइदा ?
Up Next यस्ता छन् साङ्लाको कारण लग्न सक्ने रोग र साङ्ला भगाउने सजिलो उपाया